लर्सघाको घले राज्य जैन खानले कब्जा गर्नुअघिसम्म लर्सघादेखि साम्रीँसम्म राज्य गर्थे घलेहरू । लिगलिगकोट चाहि घटनाक्रमहरूले आधुनिक नेपालको जगको रूपमा देखिए पनि लिगलिगका घलेहरू को थिए भन्नेबारे सामान्य विमर्श पनि भएको पाइन्न ।
फुटबलमा झगडाका अनौठा किस्साहरू धेरै सुनिन्छन् । एउटा यस्तै घटना हो, ठमेल–११ र थ्री–स्टारका खेलाडी–समर्थकबीच दशरथ रंगशालामा भएको झगडा । यो ०३८ सालअगाडिको घटना हो, अनि अवसर सहिद स्मारक लिग । दशरथ रंगशालाको मैदान युद्धभूमिमा परिवर्तन भएको थियो । त्यति बेलाको त्यो खेल र झगडा हेर्नेहरू अझै भेटिन्छन् । समस्या के छ भने झगडाको कारणलाई लिएर ठमेल समर्थक एकथरी सुनाउँछन् भने थ्री–स्टारका शुभेच्छुक अर्कोथरी ।
आज भन्दा ११ वर्ष अगाडि जेठ ५ गतेकै दिन शिक्षक कुमार राईले न्यू डायमन्ड एकेडेमीमा छात्राहरूलाई पहिलो पटक प्रशिक्षण दिएका थिए । आजको दिनसम्म आइपुग्दा न्यू डायमन्डको छात्रा टोलीले नेपाली महिला भलिबल जगत्मा पृथक् पहिचान बनाइसकेको छ । दुई दशक शिक्षण पेसामै बिताएका कुमारले यहाँसम्मको यात्रा तय गर्दा अनेक आरोह–अवरोहको सामना गरे तर उनले कहिल्यै पछि हटेनन् । नतिजा, न्यू डायमन्ड अहिले नेपाली भलिबलको उत्कृष्टमध्येको टोलीमा गनिन्छ ।
‘हो, म जीवितै छु’
लेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमद जुलाई महिनादेखि ९२ पूरा भई ९३ वर्ष लाग्नेछन् । त्यसैले त दुनियाँले उनलाई कुनै एक देशको प्रधानमन्त्री मात्र नभई विश्वकै सबैभन्दा पाका निर्वाचित नेताको रूपमा चिन्न थालेको छ ।
सबै मान्छेको आआफ्नो समय हुन्छ । समयसँग मान्छेको जीवन अभिन्न रूपमा गाँसिएको हुन्छ । समयको गति समान ढंगले बगेको हुन्छ, तर त्यही समय कसैका लागि अनुकूल र कसैका लागि प्रतिकूल भइदिन्छ । अनुकूल समयको मान्छेले खास याद गर्दैन, जब प्रतिकूल समय हुन्छ, मान्छे रन्थनिन्छ, सामना गर्छ ।
भ्रष्टाचारको भाष्य र इमानजमानको खोजी
भ्रष्टाचार नेपालजस्ता गरिब मुलुकहरूको मात्र दु:ख हो ? भ्रष्टाचारको भाष्यलाई कसले परिभाषित गरिरहेको छ ? भ्रष्टाचारमुक्त दुनियाँ सम्भव छ ? कस्ता ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वा नैतिक कारणले भ्रष्टाचार उमार्छन् र हुर्काउँछन् ? मानवीय मूल्य र इमानजमान भन्ने जिनिस के हो ? भ्रष्टाचारको उपचार के हुन सक्छ ?
भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ब्रोडगेज रेल्वे ट्रयाकसँगै धनुषाको खौजरी स्टेसनमा देवी देवताको नामबाट नामकरण गरिएको सीता, राम, गुह्येश्वरी, चन्द्र, सूर्य, महावीर, गोरखनाथ रेल्वेका पुराना इन्जिन अलपत्र छ ।
गल्ती नसच्च्याउनु अर्को गल्ती
नेपाली कवितामा १९९१ देखि थालिएर क्रमश: विस्तारित आधुनिकताको विकासमा थुप्रै कविहरूको उल्लेख्य योगदान छ । यसरी योगदान पुर्‍याउने कविहरूमा गोपालप्रसाद रिमाल पनि हुन् । १९९२ मार्ग–पौष महिनाको ‘शारदा’ पत्रिकामा प्रकाशित ‘प्रति’ शीर्षक कविताका माध्यमबाट आफ्नो कवितायात्राको प्रारम्भ गर्ने रिमाल नेपाली कवितामा आधुनिक कालको थालनीकर्तामध्येका एक हुन् ।
‘फेसबुक छाड्न खोजें तर सकिनँ’
जब म कलेजमा पढ्थें तब मेरो मिल्ने साथी र मबीच ठूलो फाटो आयो । यो फेसबुकको कारणले थियो । ‘एलिसोनको इन्गेजमेन्ट भएजस्तो छ,’ हामी दुवैको एक साथीले मलाई म्यासेज गरे । ‘मैले फेसबुकमा देखेको जस्तो लाग्छ,’ उनले लेखेका थिए ।
आइपुग्नुअघि यहाासम्म लखेटिंदै धर्मलिंगहरुबाटधरती बनाइएकी हुा जबरजस्त
नयाँदिल्लीको चकाचौँधभन्दा केही पर रहेको कालिन्दीकुञ्चको एउटा सानो चउरमा रहेको ‘रोहिंगा शरणार्थी’ को अस्थायी शिविरमा भेटिए— चालीसवर्षे अब्दुल करिम । उनले म्यानमार छाडेको ९ वर्ष पुगिसक्यो । पछिल्ला वर्षमा आफ्नै माटोमा टेकिसक्नु भएन, बसिसक्नु भएन । हुनलाई केही बाँकी रहेन । त्यसैले रोहिंगा पहिचानमा भारतमा बस्नुको विकल्प पनि रहेन, यसरी जीवनमा अर्को युद्ध लडिरहेका रहेछन् अब्दुल ।
कथा वाचनलाई रोचक बनाउनका लागि अपनाइने केवल एउटा रूप हो, जानरा । ‘डमरुको डन्डीबियो’ लाई लेखक खगेन्द्र लामिछानेले बाबु र छोराबीचको कथालाई स्पोर्ट्स ड्रामा जानरामा रहेर वाचन गर्ने जमर्को गरेका छन् । त्यसका लागि लामिछानेले देशको मौलिक र लोपोन्मुख खेल डन्डीबियोको सहारा लिएका छन् ।